Muxuu kusoo iblaaday kulankii Manchester city vs Southampton iyo recoradii laga bartay – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Muxuu kusoo iblaaday kulankii Manchester city vs Southampton iyo recoradii laga bartay
Isniin, November, 5, 2018(HNN) Kooxda Mnachester ayaa xasuuq balaaran u geesatya dhigeeda Southampton ciyaar xiiso badneed oo hal dhinac uun kasocotay waxeey kusoo dhamaatay 6-1, oo eey City ku adkaatay.
Manchester city ayaa Etihad Stadium kuso dhaweesay Southampton eeyna edeen kulan Sky blue eey bandhig sare sameyeen waxeyna dib ugu solabteen hogaanka horyaalka premier league ga .
daqiiqadii 6aad waxaa gool iska dhaliyay dafaca layirahdo Wesley Hoed waxaa eey siwadeen kubada qurxoon iyo baska cajiibka ahaa daqiqadii 12 aad laba iyo ebar waxaa kadhigay dhaliyaha sare ee Sergio Aguero .
daqiqadii 18aad markeey eheed waxaa saex iyo eber kadhigay Captainka nadiga David Silva waxaana sii socday golasha darsinka ahaa ee koxda dhalineesay .
daqiqadii 30aad waxaa gool u sooceliyay koxd Saints warer yahankooda Danny Ingswaxeyna eheed gool kulaad kadib laqad uu sameyay golhayaha City Ederson kulanka ayaana noqay 3-1 oo Manchester city kuhor kaceeso .
markii dib lasagu solabtay qeebta danbe iyadoon wax badan socon waxaa gool ansaxiyay xidiga Raheem Sterling natijada ayaa isku rogtay 4-1 oo City kuhogamineeso.
daqiqadii 67aad waxaa labeestay Raheem Sterling oo ciyaartan mid sare ka ahaa wuuxna kadhigay 5-1 oo Manchester City KUhor kaceeso .
Leroy Sane ayaa bandhiga golasha soo idleeyay daqiqadii 90aad ee kulanka wuxuna kadhigay in guud ahaan kulanka soo dhamaado 6-1 oo Manchester City guul fudud garonkooda kugareen taasi oo dib boska kobaad hatan eey kufadhiyaan.
Raheem Sterlin ayaa si toos ah ugu lug leh 39 gool tan iyo xili ciyaredkii lasoo dhaafay 24 isagaa dhaliyay 15 na wuu cawiyay .
Sergio Agüero ayaa ah ciaayaari yahanka labaad ee si dhaqso ah horyalka premierr league kaas oo dhaliya 150 gool wuuxna ciyaaray 217 kulan.
Wesley Hoedt ayaa ah dafaca xili ciyaredka iska dhaliyay labo gool halka Danny Ings uu yahay xiidiga ugu badan ee koxdiisa golo badan u dhaliyay xili ciyaredkan waa sadex gool Koxdiisa Southampton .
Muxuu kusoo iblaaday kulankii Manchester city vs Southampton iyo recoradii laga bartay added by admin on 05/11/2018